Last updated: Jan. 06 2018 | 2 Maminitsi verenga
kangani ane ichi chakaitika kwauri? shamwari yako uye uri vamire muzariro uye ukaona mukadzi anokwezva. Imi mudane dibs uye ipapo akakundikana kukwira netambo. Unogona kunzwa kuti mukadzi anoda kunzwa mutsetse asi zvino, tsime, uri rurimi rakasungirwa. Pane kukwanisa mapango mukadzi iwe anopedzisira muchizadzwa neromuromo neshamwari yako, "Cat akamuka rurimi rwako?"
Mumwe munhu aiva mugove wavo apwanye kuchikoro. Muupenyu hwako zvakare paiva musikana uyu kuti uchada kudaro zvikuru - tora naye, kuenda kufirimu, maoko uye kazhinji vane nguva huru. Asi imi zvaisazofa kupfupikisa ushingi - kana wafunga hazvina kunyatsokwana kana ungadai nguva dzose kuona mukadzi wako muchiroto maoko kuchikoro Adonis. Uye imi chinyararire rikabudisa, chete kufunga kwake uye nokugomera.
Zvakakwana kuchinja nyaya - chii chaunoziva pamusoro masvosve? Hauna here kupiwa izvi zviduku tumbuyu chero pfungwa, muve? Chinhu chokutanga chinouya mupfungwa dzako paunoona muhutongi masvosve kuti bash navo.
Asi unoziva kuti masvosve kunotidzidzisawo zvinokosha muupenyu zvidzidzo mapango mukadzi? Ngationei sei.
chiito #1 - Usamirira zvinhu zviitike
Masvosve parwendo nguva; vari nguva dzose kuita chinhu. Most vakadzi rudo varume tora mutariri. Saka kana ukaramba kumirira mukadzi wako hope kuuya kwamuri uye Chitaura rudo, zvino unogona kukanganwa vakadzi vakawanda uchifarira. Kana uchida uriri mukadzi wako nyore kufamba naye uye kuti uchida naye. In yakaipisisa zvingaguma zvaitika iye achati aiwa.
chiito #2 - Usaramwe
Masvosve regai kusiya - vanoziva kwavaienda uye vasvike nayo pakati kukundikana uye zvinotsausa. Waifanira kuramba wako wokutanga? Usanetseke; haisi mugumo upenyu. Edza zvakare ... Funga firimu avo magamba kuti pakupedzisira vakakwanisa Woo vakadzi vavo kunyange kana vakanga varamba nguva uye zvakare.
chiito #3 - Iva pfungwa
Masvosve kuva nezvinangwa chaiwo pfungwa - vanoziva kana vasingagoni kuponesa nokuti achityisa nguva vakasungirwa kufa. Kana uchida mukadzi yaunoda mapango rambai muchizadzwa shure kwake. Just nechokwadi iwe kushandura mitsetse ako uye manyorerwo.
chiito #4 - Save mitsetse dzenyu
Masvosve kudya zvimwe zvokudya zvavo ivo ndiponese vamwe. Kusvikira kuti mukadzi ane hanya haufaniri zviri ammos venyu vose umwe. Iva shamisa; kuva rokusika uye yepakutanga uye pakupedzisira iye achava zvako.
Kwete kunzwa zvakare kuti masvosve vasingakoshi, uri? Ehe, anotidzidzisa zvidzidzo zvakawanda zvinokosha muupenyu, kusanganisira kupfuura chinyakare mumwe ari kukwezva nemukadzi flooring naye. Kana uine mukadzi uyu unoda pasi kungoti kuita sezvinoita svosve pano. Wozouya kundiudza kana uchiri kugomera sezvo mukadzi wako kurota ari whisked kure nomumwe Adonis.